Wakarasikirwa nehurukuro yanezuro here? Pano iwe unogona kuzviona zvakare | Ndinobva mac
Zvirokwazvo vazhinji venyu maive muhupenyu hwatakaita pamwe chete neve iPhone Actualidad vamwe vedu, vamwe vazhinji vakatevera mharidzo yaApple nezuro kubva kune yavo webhusaiti, vamwe vazhinji kubva kuApple yepamutemo YouTube chiteshi, asi kune avo vasingakwanise kuona iyo yakazara hurukuro nezuro masikati pano tinogovana vhidhiyo yechiitiko chakazara.
Muchiitiko ichi, ndiko kunanga kuwana kune webhusaiti yeApple, muchikamu chezviitiko. Kazhinji kambani yeCupertino inowanzo rembedza maminetsi ekuratidzira mushure mekupedza, munguva dzichangopfuura sezvo iri vhidhiyo yakazara inoitirwa panguva imwe chete pawebhusaiti yayo muchikamu chezviitiko.
Kwaani ichi chinongedzo chakananga kune Apple webhusaiti iwe unogona kuona chiitiko zvakare yeiyo iPad Pro, iMac nyowani, maAirTag, Apple TV 4k nevamwe… Isu tinogovanawo zvakananga Apple yeYouTube chiteshi mavakapa hurukuro yacho:
Uye kana zvese izvi zvikaita sezvidiki kwauri, isu tinogovanawo chinongedzo kuYouTube chiteshi cheApple yese matiri kutepfenyura chiitiko chiripo.
Iye zvino hauna chikonzero, kana usati waona chiitiko cheApple chose tinokukurudzira kuti uchione sezvo nhau dzichinakidza chaizvo uye mamwe acho akamirirwa kwenguva refu sekuuya kweAirTags. Nakidzwa nechiitiko uye pamusoro pezvose isu tinotarisira kuti unogona kutenga zvimwe zvezvigadzirwa zvitsva zvakatangwa nekambani muna Kubvumbi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Wakarasikirwa nehurukuro yanezuro here? Pano iwe unogona kuzviona zvakare
Iyo itsva Apple TV 4K inotibvumidza, kekutanga, kubvumirana neApple Care +